बर्डफ्लु देखिएका बेला कुखुराको मासु खाने कि नखाने ? - HelloKhabar
२०७७ माघ २०, मंगलवार १९:२३
डा. पुनले पशुपंक्षीको हेरचाह गर्ने किसान तथा ओसारपसार गर्ने मानिस, पंक्षीको बजारमा बेच्ने मानिस, खरिद गर्ने ,मासु काट्ने मानिसमा यो भाइरसको जोखिम रहने बताउँछन् । मुख्यतः यो भाइरसबाट बच्न सरसफाइ एकदमै जरुरी हुने उनको भनाइ छ । यो भाइरस पंक्षीबाट मानिसमा सर्ने भनेतापनि मानिस मानिसबाट सर्छ भन्ने देखिएको छैन तर सजग हुनुपर्ने हुन्छ । उनी बर्डफ्लु लागेमा रुघाखोकी तथा ज्वरोको लक्षणहरु देखिन सक्ने बताउँछन् । पशुपंक्षीको र्‍याल, सुली, प्वाखबाट यो रोग सर्न सक्ने हुन्छ ।
एक विज्ञप्तीमार्फत स्वास्थ्य सेवा विभागले पंक्षीहरुसँग काम गर्नु परेमा आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षाका उपायहरु अपनाउन र बर्डफ्लु देखिएका क्षेत्र तथा स्थान वरपर रुघाखोकी लक्षण भएका व्यक्तिहरुसँग सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ । नेपालमा पहिलो पटक सन् २००९ मा घरेलु पंक्षीमा बर्डफ्लु देखापरेको थियो । सन् २०१९ मा यस भाइरसको कारण पहिलो पटक २१ वर्षीय युवकको मृत्यु भएको थियो । -इकान्तिपुरबाट
मुख्य समाचार हेलाेखबर - २०७७ माघ २०, मंगलवार १९:२३
आर्थिक २०७७ माघ २०, मंगलवार १९:२३
मुख्य समाचार २०७७ माघ २०, मंगलवार १९:२३
ब्यानर २०७७ माघ २०, मंगलवार १९:२३